Hodges တက္ကသိုလ်မှစျေးသက်သာ »ကျူရှင်နှင့်အခကြေးငွေများကိုကြည့်ရန်
Hodges တက္ကသိုလ်မှကြိုဆိုပါသည်။ Hodges ၏ကျူရှင်နှင့်စရိတ်များသည်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရှိပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများအကြားတွင်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ပညာသင်ဆု၊ ထောက်ပံ့ကြေးနှင့်ကျူရှင်လျှော့စျေးတို့ဖြင့်ကျူရှင်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ဖက်ဒရယ်ချေးငွေနှင့်ထောက်ပံ့ငွေများအပြင်ပညာရေးဌာနမှနိုင်ငံတော်ဘဏ္financialာရေးအထောက်အပံ့များကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်များသည်၎င်းတို့၏ကျူရှင်တက်ရန်မည်မျှစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိသည်ကိုသင်သိပါသလား။ ပုဂ္ဂလိကအကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းများသည်တစ်နာရီလျှင်ကျူရှင်နှုန်းကိုစာရင်းပြုစုရန်လိုအပ်သည်။ အများပိုင်တက္ကသိုလ်များအားအသားတင်ကုန်ကျစရိတ်များကို“ ပြည်နယ်တွင်းကျူရှင်” ဟုခေါ်လေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင်အများပြည်သူတက္ကသိုလ်များသည်ကျောင်းအပ်ပြီးသည်နှင့်ကျောင်းသားတစ် ဦး အားအကဲဖြတ်နိုင်သည့်အပိုစရိတ်များနှင့်အခကြေးငွေများကိုမရှင်းလင်းပါ။ Hodges တွင်ကျောင်းသားများသည်သူတို့ရရှိသောပညာရေး၏တန်ဖိုးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်စေရန်သေချာစေလိုသည်။
ကျောင်းသားတစ် ဦး သည် RN အစီအစဉ်ကို Hodges တက္ကသိုလ်နှင့်လူထုကောလိပ်နှစ်ခုစလုံးတွင်နှိုင်းယှဉ်နေသည်။ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး နှိုင်းယှဉ်လျှင်, Hodges တူညီတဲ့အစီအစဉ်အတွက်ပိုမိုကုန်ကျပုံရသည်။ ကျောင်းသားကမသိသောအချက်မှာရပ်ရွာကောလိပ်သည်နှစ်နှစ် RN ဒီဂရီကိုကမ်းလှမ်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး Hodges သည်အလုပ်ရှင်မှနှစ်သက်သောသူနာပြုဘွဲ့အတွက်သိပ္ပံဘွဲ့ရရှိရန်ကမ်းလှမ်းနေစဉ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်တွင်လည်းကျူရှင်၊ စာအုပ်၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ ယူနီဖောင်းနှင့် stethoscope တို့ပါ ၀ င်သည်။ ရပ်ရွာကောလိပ်သည်ဤပစ္စည်းများအတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများတောင်းခံနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ပရိုဂရမ်နှစ်ခုစလုံးသည်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်သင်တန်းများလိုအပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်ကိုအရှိန်အဟုန်ဖြင့်မြန်ဆန်စွာ၊ အတန်းအရွယ်အစားသေးငယ်သည့်နေရာတွင် ထား၍ အလုပ်လုပ်သောလူကြီးများတက်ရောက်နိုင်သည့်အချိန်နာရီများအတွင်းသင်ကြားပို့ချပေးသည်။
Hodges တက္ကသိုလ်နှင့်အများပြည်သူသုံးလေးနှစ်တက္ကသိုလ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သောကျောင်းသားတစ် ဦး သည်ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့အတွက်အကြွေးတစ်နာရီလျှင်ပျမ်းမျှဒေါ်လာ ၂၄၀ နှုန်းဖြင့်ကြော်ငြာနေသည်။ Hodges ၏ဒေါ်လာ ၅၉၀ နှုန်းထားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းသည်စိတ်ကူးကောင်းသည့်သဘောတူညီချက်ဟုထင်ရသော်လည်းအနည်းငယ်နက်ရှိုင်းစွာတူးကြပါစို့။ ပထမအချက်မှာသင်ပြည်နယ်တွင်ရှိလျှင်ထိုနှုန်းသည်သာဖြစ်သည်။ အများပြည်သူသုံးလေးနှစ်တက္ကသိုလ်တက်သည့်ပြည်နယ်ကျောင်းသားများ၏ပျမ်းမျှနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၈၀၀ ခန့်ရှိသည်။ Hodges တက္ကသိုလ်မှသင်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုခနှုန်းနှုန်းအတိုင်းတူညီစွာပေးသည်။
Hodges ၏အခြေခံနှုန်းမှာ ၅၉၀ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအပေါင်းမော်ဒယ်လေးခုနှင့်သင် ၁၂ ခု၏ ၁၆ ခုအတွက် ၁၆ ခုရနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်ဖလော်ရီဒါတွင်နေထိုင်ပါကဒေါ်လာ ၁၄၂၀ ခန့်ဖြစ်သော EASE ထောက်ပံ့ကြေးအတွက်အလိုအလျောက်အရည်အချင်းပြည့်မီလိမ့်မည်။ 595-16 ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဒေါ်လာ ၃၅၃.၇၅ / တစ်နာရီလျှင်အနည်းဆုံးပေးရလိမ့်မည်။ GI ဥပဒေကြမ်းများ၊ စစ်ရေးနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအထူးလျှော့စျေးများ၊ အဝါရောင်ဖဲကြိုးပရိုဂရမ်များ၊ အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအရင်းအမြစ်ရန်ပုံငွေ၊ ပညာသင်ဆုများ၊ တောက်ပသောအနာဂတ်၊ Pell Grant ဆုများနှင့်ပြည်တွင်းပညာသင်ဆုများ၌သင်ထည့်သည့်အခါအချို့ကျောင်းသားများသည်လုံးဝဘာမျှမတတ်နိုင်ကြပါ။
အများပြည်သူသုံးလေးနှစ်တာတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာမင်းရဲ့ပထမဆုံး ၂ နှစ်တာကာလမှာဘွဲ့ရကျောင်းသားတစ်ယောက်သင်ကြားပေးမယ့်ကျောင်းသား ၂၀၀-၃၅၀ အထိသင်တန်းတွေတက်နိုင်ပါတယ်။ Hodges ၌ကျွန်ုပ်တို့၏အတန်းသည်ပျမ်းမျှ ၁၂-၁၅ ဖြစ်ပြီးလက်တွေ့ဘ ၀ အတွေ့အကြုံရှိသောဆုရဆရာများကသင်ကြားသည်။ ပြီးနောက်၊ သင်ရရှိသောအာရုံစိုက်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုသည်သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သောအရာဖြစ်နိုင်သည်။
Hodges လျှောက်ထားသောဖလော်ရီဒါဌာနေကိုယ်စားလှယ်နှင့် Active Guard အဖွဲ့ဝင်
ဘွဲ့ကြိုနှုန်း = ချေးငွေတစ်နာရီလျှင် $ 595 x 12 FT Credit Hours = $ 7140– စာသင်နှုန်းအတွက် $ 1420 ဖြစ်သော (တစ်နှစ်လျှင် $ 2841) = 5720.00
သင်တို့သည်ငါတို့၏ Core + 16 အစီအစဉ်နှင့်အတူထိုစျေးနှုန်း4ခရက်ဒစ်ရလိမ့်မည်! $ 5720/16 ချေးငွေ = $ 357.50 - $ 250 တက်ကြွသောစစ်ရေးလျှော့စျေး = ခရက်ဒစ်နာရီနှုန်း $ 103.75 ။
* ကျူရှင်နှုန်းသည်လူတစ် ဦး ချင်း၏အခြေအနေနှင့်၎င်းတို့ရွေးချယ်ထားသောလေ့လာမှုအစီအစဉ်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အချင်းပြည့်မှီသော ၀ င်ခွင့်နှင့်ဘဏ္Aာရေးအထောက်အကူပြုညှိနှိုင်းရေးမှူးများသည်သင်၏အနာဂတ်ကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပါစေ။ ယနေ့လျှောက်ထားပါ။
ခရက်ဒစ်နာရီအတန်းအားလုံးအတွက်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း - အကြွေးတစ်နာရီလျှင်ဒေါ်လာ ၅၉၀
ခရက်ဒစ်နာရီအတန်းအားလုံးအတွက်ဘွဲ့လွန်သင်တန်း - အကြွေးတစ်နာရီလျှင်ဒေါ်လာ ၇၉၀
အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုဒုတိယဘာသာစကားအစီအစဉ်အနေဖြင့် - တစ်နာရီလျှင်ဒေါ်လာ ၂၉၅ ဒေါ်လာ
အထူးအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများ - ခရက်ဒစ်တစ်နာရီလျှင်ဒေါ်လာ ၃၃၅ ဖြစ်သည်။
အလိုက် -based အစီအစဉ်ကျူရှင်:
BSN အခြေခံအစီအစဉ်ကျူရှင် - တစ်နာရီလျှင်ဒေါ်လာ ၁၇,၂၀၀.၀၀
BSDH အဓိကအစီအစဉ်ကျူရှင် - တစ်မိနစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၁၇,၂၀၀.၀၀
EMS ၏အဓိကအစီအစဉ်ကျူရှင် - အပိုင်း ၁ - session တစ်ခုအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀,၁၆၆.၆၇
MAcc အဓိကအစီအစဉ်ကျူရှင် - တစ်ခေါက်လျှင်ဒေါ်လာ ၉,၉၆၆.၆၇
PTA အဓိကအစီအစဉ်ကျူရှင်: တစ် ဦး လျှင် $ 10,933.33
PN အဓိကအစီအစဉ်ကျူရှင် - တစ်နာရီလျှင်ဒေါ်လာ ၃၆,၉၈၀.36,980.00
CMHC ၏အဓိကအစီအစဉ်ကျူရှင် (Cohort - Track) - တစ်နာရီလျှင်ဒေါ်လာ ၉,၂၇၁.၄၃
CMHC ၏အဓိကအစီအစဉ်ကျူရှင် (Non-Cohort) ** - အကြွေးတစ်နာရီလျှင်ဒေါ်လာ ၈၃၀
UPOWER ™ဘွဲ့ကြိုစာရင်းသွင်းမှု - ၆ လလျှင်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀၀
UPOWER ™ဘွဲ့လွန်စာရင်းသွင်းမှု - ၆ လလျှင်ဒေါ်လာ ၃၅၀၀၀၀
အဘယ်ကြောင့် Hodges တက္ကသိုလ်ကိုရွေးချယ်ပါ?
ချီးမြှင့်ခြင်းအနိုင်ရပါမောက္ခများကသင်ကြားသက်သေပြလုပ်သားအင်အား -based သင်ရိုးညွှန်းတမ်း
ယနေ့ #MyHodgesStory ကိုစတင်ပါ။
ရရှိနိုင်သည့်ဘဏ္Aာရေးအထောက်အပံ့၊ ပညာသင်ဆုများ၊ လူနည်းစုများနှင့်လျှော့စျေးအစီအစဉ်များအကြောင်းလေ့လာပါ
ဘွဲ့လွန်လျှောက်လွှာကြေး - ဒေါ်လာ ၅၀
ကျောင်းသား ၀ န်ဆောင်မှုကြေး - session တစ်ခုအတွက် $ 250
စာအုပ်များ / ရင်းမြစ်ကြေး (မပါ ၀ င်လျှင်) - သင်တန်းချိန်အတွက် ၀ $ ၀ မှ ၄၀၀ အထိ
အထူးလျှော့စျေးအပါအ ၀ င်ကျူရှင်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံအတွက်လက်ရှိကြည့်ပါ မှတ်ပုံတင်ခြင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်အဘို့။